Inkomba yokudla ye-insulin > Ukudla ngesifo sikashukela
I-Buckwheat Glycemic Index
Enye yezinkomba okumele icatshangwe lapho ulahlekelwe isisindo inkomba ye-insulin (AI) yemikhiqizo. Le nkomba ibalulekile kulabo abazibandakanye nezemidlalo, abafuna ukunciphisa umzimba. Kepha kubaluleke kakhulu kulabo abagulayo isifo sikashukela. Ngemuva kwakho konke, kusukela ekukhiqizweni komzimba insulinngqo kuya ngesimo somzimba walezo ziguli.
Imininingwane yalesi sikhombisi iqale ukuvela ngonyaka we-1997. Kusukela ngalesosikhathi, lo mqondo ubusetshenziswa ngenkuthalo kwezokwelapha zesimanje kanye nokudla. Imininingwane ethile mayelana ne-AI itholakala kuwo wonke umuntu, lapho kusetshenziselwa khona itafula elikhethekile le-insulin index yemikhiqizo yokudla. Iyini inkomba ye-insulin futhi kungani udinga ulwazi ngayo kulabo abafuna ukunciphisa umzimba, okuxoxwe ngayo kulesi sihloko.
I-carbohydrate metabolism: kwenzeka kanjani?
Ukuqonda okucacile kokuthi iyini inkomba ye-insulin, udinga ukuqonda izinqubo ezenzeka emzimbeni. Ngakho-ke, ngesikhathi se-carbohydrate umzimba umuntu uthola inani lamandla alidingayo empilweni. Le nqubo ibhalwe ngale ndlela:
Ngemuva kokuthi ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi angena emzimbeni, aqhekeka abe ama-saccharides alula (ushukela, i-fructose). Ngokungena ezindongeni zamathumbu angena egazini.
Ukwanda okuthe xaxa kweglucose yegazi, okuyisibonakaliso sokukhiqizwa kwe-insulin. I-insulin iyinto ye-hormone ehambisa ushukela kwezicubu nasemangqamuzaneni, bese inciphisa egazini. Ngokuvumelana nalokho, uma lokhu ihomoni akwanele, khona-ke le nqubo iphazamiseka.
Engxenyeni yomzimba monosaccharidesisetshenziswa 'njengengca eluhlaza' yokukhiqiza amandla, enye ingxenye ifakwa kwizicubu, njengoba glycogen- endaweni yokubhuka. I-Glycogen ibalulekile emzimbeni, ngoba inquma izinga elijwayelekile loshukela phakathi kokudla. Futhi, ngezindleko zayo, izinga elijwayelekile le-glucose egazini liyabuyiselwa uma, ngenxa yokusebenza ngokomzimba, imfucumfucu yalo enkulu yenzeka.
Ngenxa yalokho, kanye nokuntuleka ekukhiqizweni kwe-insulin ye-hormone iba Uhlobo 1 sikashukela, okungukuthi, ukuthembela i-insulin. Uma ukukhiqizwa kwe-insulin kwanele, kepha amaseli alahlekelwa umuzwa wawo kuwo, lapho-ke sikhuluma ngakhoUhlobo 2 sikashukela.
Uma iziguli ezinalezi zifo zilawula ngokucophelela ukudla kwazo, ngenkathi zinaka i-glycemic kanye ne-insulin indices, lapho-ke ziyakwazi ukugcina amanani ashukela wazo egazi evamile. Yingakho ezigulini ezinesifo sikashukela, inkomba ye-insulin iyinkomba ebaluleke kakhulu.
Inkomba ye-Glycemic ne-insulin: yini umehluko?
Inkomba ye-Insulin- inquma ukuthi ama-pancreas akhiqiza malini lapho kungena ama-carbohydrate ngokudla okuthile emzimbeni. Kubalulekile ukuqonda ukuthi i-AI ayihlali ihambelana nenkomba ye-glycemic.
Ukuhlanganiswa kwe-insulin emzimbeni kungavuseleli ama-saccharides kuphela, kepha futhi namafutha, kanye namaprotheni ngobuningi obukhulu. Noma izinga le-glycemia lingadingi ukwehla, le nqubo iyenzeka. Ngakho-ke, ukukhishwa okubaluleke kakhulu kwe-hormone kushukumisa ukusetshenziswa kwesinkwa, yize inkomba yayo ye-glycemic ingeyona ephezulu kakhulu.
Akunakwenzeka ukunquma inkomba ye-insulin yodwa, ngoba lokhu kwenzeka ezimeni zezifundo zokwelashwa nokwelashwa kwelebhu. Ngakho-ke, ukuyinquma, kusetshenziswa itafula elikhethekile lemikhiqizo yokudla enesibonakaliso se-AI.
Inkomba ye-Glycemic - Lesi yinkomba ekhombisa ukuthi amazinga kashukela egazi anganda ngokushesha kanjani ngemuva kokufakwa komkhiqizo noma isitsha esithile. Le nkomba inquma izici eziningana, phakathi kwazo:
umsebenzi wokuphendula kwe-enzymatic emathunjini,
ukusetshenziswa kokwelashwa okushisa,
izimo zokugcina umkhiqizo
hlangene neminye imikhiqizo.
Ekucwaningweni, ososayensi baphawula ukuthi ama-glycemic kanye nama-insulin indices awahambisani nomkhiqizo ofanayo. Isibonelo, i-lactose's GI inkulu kune-AI, kepha i-yogi ye-yogurt iphakeme kakhulu kune-GI - 115 no-35 ngokulandelana. I-GI iyinkomba yokuthi abantu abahlupheka phakathi nenqubo yokudla baqondiswa okhuluphele.
Ungazisebenzisa kanjani izinkomba lezi ekusebenzeni?
Abantu abagulayo isifo sikashukela, kufanele ngaso sonke isikhathi siqaphele kakhulu ukwenza imenyu. Kulokhu, okokuqala kubalulekile ukucubungula inkomba ye-glycemic, bese ukhetha imikhiqizo ebheka i-AI. Ukucatshangelwa kwalesi sikhombisi ekwakhiweni kwemenyu nakulabo abanokuthambekela kwalesi sifo kufanelekile.
Kodwa-ke, kubantu abaphilile, le nkomba ibalulekile futhi ukuthi uyicabangele lapho udweba imenyu. Ukusetshenziswa kwenani elikhulu lokudla okune-AI ephezulu kuholela ekunciphiseni kwama-pancreas kanye nokunqwabelana kwe-lipids. Kulokhu, umzimba awusebenzisi isitoreji esivele sinqwabelene, okuholela kusethi isisindo ngokweqile kanye nokuthuthuka kwenempilo.
Kubalulekile ukucubungula i-AI zombili ukwakheka kokudla okunempilo, kanye nokunciphisa isisindo. Lokho kusho ukuthi, umuntu ukhuluphele hhayi kulokhu akudlayo, kepha kuya ngokuthi ikhiqizwa kangakanani i-pancreas emzimbeni wakhe. Isibonelo esithandekayo kulokhu kungenzeka kube ushizi we-cottage: abaningi bayayidla, ngoba kungukudla okunempilo okunokuqukethwe okuphezulu kwe-calcium. Ushizi wekotishi ongenamafutha, abantu abaningi ngaphandle kwesazela banokudla kusihlwa, bengazi ukuthi ngaphansi kwethonya labo izinga le-insulin likhuphuka ngaphezu koshokolethi.
Kuyafaneleka ukukhumbula amanye amaphuzu achazayo:
i-AI ephezulu iyabonakala kubisi, ushizi wekhokho, isinkwa, amazambane, ama-yoghurts, namakhekhe,
isilinganiso i-AI inhlanzi, inyama yenkomo,
i-AI ephansi ku-buckwheat, amaqanda, i-oatmeal,
izithelo noshokoledi omnyama nazo zine-AI ephansi.
Ungafunda okuningi ngalesi sikhombisi kusuka etafuleni elikhethekile.
Ithebula lenkomba le-Insulin
Leli thebula lifingqa ukusebenza kwe-AI kweminye imikhiqizo.
Amakhekhe e-chocolate nama-nougat 120
Amazambane abilisiwe 120
Izithelo ezomile 110
Isinkwa esimhlophe 100
Imikhiqizo yobisi oluhlaza 98
Isinkwa esinsundu 96
I-ayisikhilimu emhlophe 89
Ukubhaka, amagilebhisi 82
Ilayisi elimhlophe 79
Izikebhe zommbila 75
Ama-fries aseFrance 74
Irayisi elinsundu 62
Izinhlanzi, ama-apula 59
Isinkwa samagatsha 56
Inyama yenkomo 51
Oatmeal, pasta 40
Ibhali, i-cherry, ushokoledi omnyama, uviniga 22
Ama-apricots, amantongomane 20
Utamatisi, imifino, isitshalo seqanda, u-anyanisi, ugarliki, amakhowe, iklabishi, i-broccoli 10
Imbewu ye-sunflower engafakwanga 8
Uma siqhathanisa amanani anikezwe kulelithebula nenkomba ye-glycemic yemikhiqizo, singaphetha ngokuthi kwezinye izinhlobo zokudla azifani. Isibonelo, i-pasta ine-GI ephezulu, kepha banciphisa ukukhiqizwa kwe-insulin. Izici ezifanayo ziyiqiniso ushizi, ilayisi, amaqanda, njll. Ngakho-ke, lapho kwakhiwa imenyu yabanesifo sikashukela nalabo abafuna ukwehlisa isisindo, kubalulekile ukubheka imithetho ethile ezosiza ekwakheni imenyu kahle.
Ungayihlanganisa kanjani imikhiqizo kuyinkomba ye-insulin?
Ukudla kwamaprotheni (inyama, inhlanzi, ubisi, amakhowe) akufanele kuhlanganiswe nesitashi (amazambane, okusanhlamvu, isinkwa) kanye nama-carbohydrate asheshayo. Amaprotheni ahamba kahle ngemifino namafutha - imifino nebhotela.
Ukudla okunesitashi akuhlanganisiwe nama-carbohydrate asheshayo (amaswidi). Kuhamba kahle amafutha.
Ama-carbohydrate asheshayo angahlanganiswa namafutha.
Imifino akufanele ihlanganiswe nama-carbohydrate asheshayo.
Kukhona futhi nezincomo eziningi zokuhlanganiswa okufanele izazi zesifo sikashukela zibheke:
Inhlanganisela enhle kakhulu mayelana ne-AI yabanesifo sikashukela inhlanzi nemifino.
Ama-saccharides wokugaya kalula namafutha awanakuhlanganiswa: isibonelo, izitsha zenyama azikwazi ukugezwa phansi neziphuzo ezinoshukela.
Kubalulekile ukukhawulela inhlanganisela yama-carbohydrate namaprotheni: udla izitsha zenyama nezinhlanzi ngaphandle kwesitsha esisehlangothini, ungafaki uju ku-curd, njll.
Uma kungenzeka, ukudla kufanele kucutshungulwe kancane ngokwelashwa.
Ngokudla kwasekuseni, abanesifo sikashukela bayalulekwa ukuba badle ukudla kwamaprotheni.
Ngokudla kwakusihlwa, kufanele ukhethe ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi, ngoba enza kusebenze ukukhiqizwa kwe-pancreatic hormone isikhathi eside, kepha ngamanani amancane.
Leyo mikhiqizo ebonakala emaphaketheni njengokudla akufanele ikhethwe, ngoba amafutha avame ukufakwa esikhundleni se-carbohydrate kuwo.
Ushizi wasekhishini une-AI ephezulu, futhi ngemuva kokusetshenziswa kwayo emzimbeni kukhona ukukhiqizwa okusebenzayo kakhulu kwe-insulin.
Idizayini yokudla esekwe nge-AI
Lapho wenza ukudla okufanelekile kokunciphisa isisindo kanye nabadlali, kufanelekile ukubheka izincomo ezilandelayo:
Imenyu kufanele ilawulwe ngokudla kwamaprotheni, kanye nenani elanele lama-carbohydrate ahamba kancane.
Amanani we-Index kufanele acatshangwe, kepha kuyadingeka futhi ukwenza imenyu ngokuya ngokuthanda komuntu ngamunye.
Ukusatshalaliswa kufanele kube yinto enjengale: ibhulakufesi ibhulakufesi, isidlo sasemini sama-carbohydrate asheshayo nokudla okunesitashi, isidlo sasemini samaprotheni kanye nama-carbohydrate ayinkimbinkimbi.
I-AI ingancishiswa ngokunciphisa inani lezithelo kwimenyu. Esikhundleni sezithelo, uvame ukudla izaqathe, ezine-AI yazo ephansi. Kuyadingeka futhi ukunciphisa ukudla okuthosiwe, namakhekhe futhi sinciphise inani leyogathi edliwayo.
Itiye nekhofi ngaphandle koshukela nobisi kungumkhuba onempilo onciphisa i-AI yalezi ziphuzo.
Ukubhaka i-AI kungancishiswa ngokungeza i-applesauce esikhundleni sikashukela.
I-dessert ewusizo kakhulu kulokhu chocolate omnyama obomvu. Vele, akufanele futhi bahlukunyezwe.
Ungafaki ibhotela noma ubisi epanini. Kungcono ukuyivuna ngamafutha yemifino ukwehlisa izitsha ze-AI.
Kungcono ukudla inyama nemifino ngaphandle kwesitsha esiseceleni, njengezitsha eziseceleni, isibonelo, i-buckwheat, ukukhuphula kakhulu izitsha ze-AI. Kodwa-ke, uma iphalishi lidliwa ngokwehlukile nenyama, lokhu ngeke kwenzeke.
Kubalulekile ukusebenzisa ukudla okuphezulu kwe-AI ngokwahlukana nalokhu kudla okune-AI ephezulu. Isibonelo, uma ufaka ubisi noma uju ku-oatmeal, lesi sidlo sizoholela ekuqhekekeni kwe-insulin.
Inkomba ye-insulin ingumqondo wokuthi kubalulekile ukuhumusha kahle labo abanezinhloso zokunciphisa isisindo noma ukuthuthukisa impilo yabo. Kusuka kuleli nani lomkhiqizo ukuthi ukudla kuthinta kanjani ukukhiqizwa kwe-insulin. Futhi uma sinikezwe leli nani, singaphetha ngokuthi kungenzeka ukuthi ululame ngisho nakulokho kudla okubhekwa njengokudla. Ngenkathi ososayensi bekhomba le nkomba, kwacaca ukuthi akuwona amaswidi namakhekhe kuphela angadala ukuvela kwama-kilos angeziwe. Ngemuva kwakho konke, i-hormone ye-pancreatic ifukelwa ngenkuthalo ngemuva kokusebenzisa ushizi we-cottage shizi noma iyogathi, abantu abaningi ababheka ukuthi "ayinangozi" ngokuya ngokudla.
Ngakho-ke, kufanelekile ukubheka le nkomba futhi lapho udweba ukudla, unake hhayi kuphela i-glycemic, kodwa futhi inkomba ye-insulin. Futhi abantu abanesifo sikashukela kufanele bafunde izinkomba eziyisisekelo ze-AI ukuze bazenzele imenyu enempilo nefanele kunazo zonke.
Ungayidla kanjani i-buckwheat kushukela?
I-Buckwheat ingesinye sezilimo eziwusizo kakhulu. Kumele kube okuphoqayo ekudleni hhayi komuntu onempilo kuphela, kepha futhi onesifo sikashukela. Kuvunyelwe ukusetshenziswa ngesifo sikashukela esisheshayo, kanye nohlobo 1 nohlobo 2 lwalesi sifo. Awungeke usebenzise iphalishi le-buckwheat kuphela, kodwa nezinye izitsha ezinempilo ezivela ku-buckwheat, izindlela zokupheka ezethulwe ngezansi.
Ukupheka kwe-Buckwheat kwabanesifo sikashukela
Akunangqondo ukuthi welulama kusuka eskhungweni esinesiphuzo se-lactic acid, kepha ukusetshenziswa njalo kwe-buckwheat kuzosiza ukwehlisa amazinga kashukela, kususe i-cholesterol “embi” futhi kudaleke ukuntuleka kwamaprotheni kanye nezakhi zomzimba.
Gaya inani elincane lokudla okusanhlamvu.
I-isipuni esisodwa se-buckwheat emhlabathini sithululelwa ngephesenti elilodwa i-kefir noma i-yogurt (200 ml).
Shiya amahora ayi-10, ngakho-ke kungcono ukupheka lesi sidlo sobusuku.
Badla iphalishi eliwuketshezi eliphekwe amahlandla ama-2 - ekuseni nakusihlwa. Ukwemukelwa kusihlwa kufanele kwenzeke amahora amane ngaphambi kokulala.
Awukwazi ukuhlukumeza isidlo esinjalo, inkambo ephezulu yizinsuku eziyi-14. Ukuyifaka ngokushesha kungabangela ukwanda kokuvuvukala kwamanyikwe nesibindi.
I-30 g ye-buckwheat ithululelwa ngamanzi abandayo (300 ml).
Shiya amahora angama-3-4, bese ubeka isitsha ebhodweni lamanzi abilayo bese uletha okuqukethwe ngamathumba.
Fudumeza kubhavu wamanzi amahora ama-2.
Okulandelayo, hlunga okusanhlamvu, ungathululeli uketshezi. Ipholile futhi idliwe ama-50-100 ml izikhathi ezi-3 ngosuku ngaphambi kokudla.
I-Kefir noma iyogathi yemvelo enamafutha amancane ifakwa ku-okusanhlamvu okuqediwe, kudliwe ngaphandle kosawoti noshukela.
Ama-diabetes ayenqatshelwe ngokuphelele ukusebenzisa noma yikuphi ukudla ukuze unciphise isisindo, ukudla komuntu kufanele kube nokulinganisela.
Abalandeli bokudla kwaseJapan kungenzeka bajwayele ama-sood noodle. Ine-tint brownish, ngoba ufulawa we-buckwheat usetshenziselwa ukuxova. Ama-noodle afundile angathengwa esitolo noma uwuphekele ngokwakho ekhaya:
Bopha inhlama kusuka kufulawa we-buckwheat (0.5 kg). Uma ufulawa ophelile ungatholakali, khona-ke i-buckwheat ingabekwa phansi bese ivinjelwa ngesixha esinezimbobo ezincane. Ngemuva kwalokho kufanele kuhlanganiswe nefulawa kakolweni (200 g), uthele uhhafu wengilazi yamanzi ashisayo phansi bese uxova inhlama. Okulandelayo, engeza enye ingxenye yengilazi yamanzi ashisayo bese ekugcineni uxova. Ubunzima obukhulu ekuphekeni ama-noodle ukugoqa, njengoba inhlama inamandla futhi imile.
Lapho inhlama isigaxwe kahle, yigingqe ibe yibhola bese uyihlukanisa ube yizicucu.
Ama-Kolobok enziwa kusuka komunye nomunye futhi ashiywe ukuze "aphumule" imizuzu engama-30.
Ibhola ngalinye ligoqeka kancane libe ungqimba futhi lifafazwe ngefulawa.
Sika imichilo bese ubathumela ukuba bayobilisa emanzini abilayo kuze kuthambe.
Ama-noodle we-Buckwheat enenkukhu nemifino isidlo esigcwala ngokugcwele esipheka ngokushesha okukhulu, njengoba ubona kuvidiyo:
Ngokudla kwakusihlwa, ama-cutlets azoba wusizo:
Ama-buckwheat flakes (100 g) athululelwa ngamanzi abilayo futhi abilisiwe imizuzu emi-5 kuze kutholakale iphalishi elibonakalayo.
Amazambane aphakathi nosayizi agqamile futhi lonke uketshezi luyakhishwa kuwo.
Amamanzi avunyelwe ukuhlala, ukuze ubabhemi wesitashi uphansi. Ngemuva kwalokho chitha amanzi ngokucophelela.
Iphalishi likakhokho elipholile, amazambane acindezelwe, oqoshiwe we-1 clove kagalikhi no-anyanisi o-1 oxutshwe nosalela oyisitashi.
Inyama enamafutha inosawoti, kwakhiwa ama-cutlets, hhayi othosiwe epanini, kepha abiwe.
Ama-buccaneers ama-cutlets we-buckwheat cut ngaphandle kwamaqanda, iresiphi yakho oyophinde uyibone kuvidiyo:
Futhi kusihlwa, i-pilaf izolunga:
Epanini elingaphansi kwesivalo ngaphandle kokusebenzisa uwoyela, engeza inani elincane lamanzi, amakhowe amasha, izanqathe, u-anyanisi negalikhi imizuzu eyi-10.
Bese ufaka 1 inkomishi yamanzi, usawoti bese ufaka i-150 g ye-buckwheat egeziwe.
Pheka ukushisa okuphakathi imizuzu engu-20.
Indishi eqediwe ifafazwa nge-dill entsha ebunjiwe.
Nge-dessert noma ibhulakufesi, ungaziphatha kuma-pancake ama-buckwheat:
Ingilazi ezimbili ze-porridge ebandayo ebandayo zichotshozwa kuhlanganiswe, i-blender noma i-pusher.
Kumaqanda ama-2 enkukhu, uhhafu wengilazi yobisi onamafutha aphansi, uju wemvelo (1 isipuni) nenkomishi e-1 kafulawa, lapho kufakwa inhlama yokubhaka (ithisipuni elilodwa), inhlama iyalungiswa.
I-apula elilodwa, elihlanganiswe emacansini amancane, lifakwa kwi-buckwheat eqoshiwe, izipuni ezi-3 zamafutha zemifino zixutshwe ngaphakathi bese inhlanganisela ingezelelwa inhlama.
Hlanganisa futhi ubeke ama-pancake epanini lokuthosa elomile.
Ungapheka ama-pancake ngama-sitrobheli noshizi usebenzisa izindlela zokupheka ezivela kuvidiyo:
Ngaphezu kokudla okuphezulu, abanesifo sikashukela bangasebenzisa i-buckwheat njengesisekelo seziphuzo ezinempilo:
Ukumiliselwa. Izipuni ezimbili ze-buckwheat ejwayelekile zithululelwa ngamanzi bese zibilisiwe ihora eli-1 kubhavu wamanzi. Isiraphu kufanele sipheke kahle. Ngemuva kwalokho le ngxube iyaxutshwa. Umhluzi upholile futhi udliwa izinkomishi ezi-0,5 izikhathi ezi-2 ngosuku.
Kissel. I-Buckwheat igaywe kusetshenziswa i-blender noma ihlanganise. Izipuni ezintathu zikafulawa otholakele zithosiwe emanzini abandayo (300 ml) bese zibilisiwe ngokuvusa okungapheli imizuzu eminingana. Bacindezela i-kissel amahora ama-3 futhi baphuze izikhathi ezi-2 ngosuku ngehora eli-1 ngaphambi kokudla.
I-Buckwheat iyisigcino sezinto ezincane nezinkulu, amavithamini, izakhi zomzimba. Ukufakwa kwayo nsuku zonke ekudleni kuvumela umuntu onesifo sikashukela ukuthi ehlise ushukela ngaphandle kokudla okuqeda amandla. Ngaphezu kwalokho, i-buckwheat inomphumela onenzuzo ekusebenzeni kwe-endocrine namasosha omzimba. Udinga nje ukwazi ukuthi ungasisebenzisa kanjani ngokufanele lesi sifo futhi ungakhohlwa ngokubonana nodokotela.
Inkomba ye-glycemic ye-buckwheat kanye nokusetshenziswa kwayo kushukela
I-Buckwheat yesifo sikashukela
I-Buckwheat ngesinye sezitsha zendabuko ezikhona ekudleni kwabantu abaningi. Unambitha, uphilile futhi upheka ngokushesha ngokwanele. Ngaphandle kwalokhu, umbuzo uhlala ukuthi kungenzeka yini ukuyisebenzisa kwabanesifo sikashukela, futhi yini inkomba ye-glycemic ye-buckwheat?
Okokuqala, ukukhuluma ngezinzuzo ze-buckwheat, banaka ubukhona be-fiber kanye nokugaya ukudla kuwo. Lokhu kusikisela ukuthi njengomphumela wokudla okusanhlamvu, abanesifo sikashukela ngeke babe nokuxhuma ushukela wegazi, futhi ngenxa yalokho ubungozi be-hyperglycemia bungabhekwa ngokuphepha zero. Ngaphezu kwalokho, i-buckwheat yesifo sikashukela ingadliwa nsuku zonke, engeke ilimaze umzimba womuntu.
Inkomba yayo ye-glycemic iyunithi ezingama-55, okulinganiselwa ukuthi kuyizinkomba ezingezansi kwezinga eliphakathi, okungukuthi, kwamukeleka ngokuphelele ukusetshenziswa.
Ekhuluma ngezinzuzo zokusanhlamvu okubilisiwe emanzini noma obisini, naka iqiniso lokuthi:
kusiza ukuqinisa imithambo yegazi, eqeda ukuthuthukiswa kwe-retinopathy,
ukuba khona okuhleliwe kwephalishi ekudleni kuthuthukisa isimo sokuzivikela komzimba,
isibindi sivikelekile emiphumeleni emibi yamafutha. Lokhu kwenzeka ngenxa yokubakhona kokudla okusanhlamvu okuhlobene nohlobo lwe-lipotropic,
singakhuluma ngokwenziwa ngcono kwazo zonke izinqubo zomzimba ezihambisana nokugeleza kwegazi.
Uhlamvu olwethuliwe lusebenza ngenxa yekhono lokususa i-cholesterol eyeqile egazini lesiguli esinesifo sikashukela. Ukunakwa okukhethekile kufanele ukwakheka kwayo, okubandakanya izinto ezibalulekile ekusebenzeni komzimba okujwayelekile. Sikhuluma ngevithamini A, E, PP nesigaba B, kanye nenqubo. Ngaphezu kwalokho, izazi zesifo sikashukela ziyaphawula ukuthi i-buckwheat yehlisa ushukela wegazi ngenxa yokuba khona kwezinto ezithile zomkhondo kuwo. Isibonelo, iodine, i-iron, i-potassium nabanye, kufaka phakathi i-zinc, chromium, manganese. Ukunakwa okukhethekile kukhokhelwa emafayilini okuthiwa ama-polyunsaturated kanye nama-amino acid abalulekile, okwenza i-buckwheat ibe lusizo kakhulu.
Ukuze i-buckwheat kushukela likwazi ukuthi ibe-100% ilusizo, udinga ukufunda konke ngokuthi kungasebenza kanjani futhi kufanele kusetshenziswe kanjani. Okokuqala, ukusetshenziswa kwayo ngokubambisana nefir kuyabhekwa, okungadingi ukuphathwa kokushisa kwemikhiqizo esetshenzisiwe. I-buckwheat enjalo enesifo sikashukela sohlobo 2 izoba wusizo uma ithululelwa ngamanzi abandayo, bese ishiyelwa ekungeniseni (kungabi ngaphezu kwamahora ayi-12).
Kubalulekile ukuthi okusanhlamvu kusetshenziswe nge-kefir, enamazinga amancane wokuqukethwe kwamafutha. Ukusawoti noma ukusebenzisa noma yiziphi ezinye izinongo kukhungathekile. Ukuze wehlise ngempumelelo ushukela wegazi, kungakuhle ukuthi usebenzise ukudla okunjengalesi kungakapheli amahora angama-24 futhi kungabe kusaba khona. Akunemikhawulo eqinile enanini lokuhanjiswa. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi i-kefir ne-buckwheat kwakungekho ngaphezu kwe-kg eyodwa yohlobo ngalunye.
Ukukhuluma ngokuthi kungenzeka yini ukuthi udle i-buckwheat yesifo sikashukela, unake iqiniso lokuthi:
ngokunciphisa isisindo, kuzoba wusizo kwabanesifo sikashukela ukuhlela amasonto wokuzila, lapho kuzodliwa kuphela ama-buckwheat nokunye ukudla kwekhalori ephansi,
ngaphezu kwe-buckwheat yakudala, kunconyelwa ukusebenzisa izinhlobonhlobo zayo eziluhlaza, kanye, ngokwesibonelo, ufulawa wegama elifanayo,
ukuthi kungenzeka ukuthi i-buckwheat inesifo sikashukela sohlobo 2 noma cha inqunywa ngudokotela wezempilo noma udokotela wesifo sikashukela. Ngaphandle kokuthi ilusizo cishe kuwo wonke umuntu, ukusetshenziswa kwayo kungakhawulelwa ngeminyaka, izimo ze-pathological (uhlelo lokugaya, ngokwesibonelo).
Enye yamasiko anamuhla ajabulisayo i-buckwheat eluhlaza. Kungaba ithuluzi elihle kakhulu lokulwa nesifo sikashukela sohlobo 2. Isici sayo esihlukanisayo yikhono laso lokukhula. Lokhu kwenza ukuthi sikwazi ukukhula ngokuzimela ekhaya isitshalo sokwelashwa esiveziwe, okuyilokho, kufaka phakathi ukubakhona kwamaprotheni nama-amino acid.
I-Buckwheat kanye nohlobo 2 lwesifo sikashukela luhlangana kahle, ngoba lumunwa ngokushesha ngumzimba, luyakwazi ukumiselela amaprotheni avela ezilwaneni. Enye into ebaluleke kakhulu ukungabikhona kwayo kunoma yiziphi izingxenye ezilimazayo nezingathandeki, ama-pesticides, ama-GMO nabanye. Ekhuluma ngezici zohlelo lokusebenza, banaka iqiniso lokuthi lingasetshenziswa ngokoqobo ngemuva kwemizuzu engama-60 kusukela ngomzuzu ofakwe ngawo. Umkhiqizo osiza kakhulu uzoba nje ngemuva kokuhluma. Lokhu kuzokwanelisa umzimba wesifo sikashukela ngawo wonke amavithamini kanye namaminerali.
I-Buckwheat glycemic kanye ne-insulin index: izitsha zabanesifo sikashukela
Ngohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2, isiguli kufanele sinamathele ekudleni okuqinile, okukhethiwe ngokusho kwenkomba ye-glycemic index (GI) yemikhiqizo. Ngaphezu kwalokho, ungayinaki imithetho ejwayelekile yokudla komsoco.
Ukudla okunesifo sikashukela kufanele kufake izithelo, imifino, imikhiqizo yezilwane nezinhlamvu. Ukuzikhethela kokugcina kufanele kuthathwe ngokungathí sina. Ngempela, abaningi babo banokuqukethwe okuphezulu kwamayunithi wesinkwa, okudingeka ukwazi ngesifo sikashukela sohlobo loku-1 ukuze ulungise umjovo we-insulin efushane.
Izithelo zabanesifo sikashukela zibalulekile ekudleni kwansuku zonke. Ngezansi sizobheka okusanhlamvu okufana ne-buckwheat - izinzuzo zayo kushukela, inani lamayunithi esinkwa kanye ne-GI, izindlela zokupheka ezihlukene zokupheka.
Umqondo wemikhiqizo ye-GI uyinkomba yethonya lohlobo oluthile lokudla ngemuva kokuba kudliwe ezingeni le-glucose egazini. Ngaphansi, amayunithi esinkwa amancane (i-XE) atholakala ekudleni. Isikhombi sokugcina sibalulekile kwisifo sikashukela sohlobo lokuqala, ngoba ngesisekelo salo isiguli sibala umthamo owengeziwe we-insulin emfushane.
Inkomba ye-glycemic ye-buckwheat ngamayunithi angama-50, okufaka esigabeni sokudla okuphephile kwabanesifo sikashukela. I-Buckwheat ingaba khona ekudleni kwesifo sikashukela nsuku zonke, njengesitsha esisehlangothini, inkambo esemqoka nakumakhekhe. Umthetho oyinhloko ukuthi iphalishi liphekiwe ngaphandle koshukela.
Ama-GI groats neminye imikhiqizo ehlukaniswe izigaba ezintathu - ephansi, ephakathi nephezulu. Isigaba sokuqala siyisakhi esiyinhloko sokudla kohlobo 2 lwesifo sikashukela. Ukudla ngenani elijwayelekile kungabakhona ngezikhathi ezithile kumenyu, kepha inani eliphakeme ngaphansi kokuvinjelwa okuqinile. Lokhu kungenxa yokuthi ingozi yokuthuthuka kwe-hyperglycemia iyanda.
Amanani we-GI ahlukaniswe:
kufinyelela kuma-50 PIECES - aphansi,
50 - 70 - okuphakathi
kusuka ku-70 nangaphezulu - phezulu.
I-Low GI Porridge:
brown (brown) ilayisi.
Lapho ukhetha okusanhlamvu ekudleni kohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2, odokotela batusa i-buckwheat, ngoba ngaphezu kwe-GI ephephile, iqukethe amavithamini amaningi kanye namaminerali.
Izindlela zokupheka eziwusizo
Esikhathini sikashukela, noma yikuphi okusanhlamvu, kufaka phakathi i-buckwheat, kungcono ukupheka emanzini, ngaphandle kokufaka ibhotela. Uma kunqunywe ukuthi kuphekwe iphalishi obisini, khona-ke kungcono ukunamathela kuleso silinganiso esisodwa, okungukuthi, hlanganisa ubisi namanzi ngamanani alinganayo.
Ungenza nezitsha eziyinkimbinkimbi eziseceleni nge-buckwheat, ngokwesibonelo, ukuyikhipha ngamakhowe, imifino, inyama noma i-offal (isibindi, ulimi lwenkomo).
I-Buckwheat ayisetshenziswa njengendishi eseceleni, kepha futhi ukudala izitsha zikafulawa. Kusuka kufulawa we-buckwheat, ukubhaka kunambitheka impela futhi akujwayelekile ukunambitheka. Ama-pancake nawo enziwa ngawo.
Kusukela ku-buckwheat ungapheka izitsha ezinjalo:
iphalishi elibilisiwe emanzini noma ubisi,
nokunye okufana nokolweni ngamakhowe,
nokunye okufana nokolweni ngemifino
ukubhaka okuhlukahlukene kwe-buckwheat.
I-Buckwheat pancake iresiphi ilula kakhulu ngokulungiselela kwayo. Izithako ezilandelayo zizodingeka:
ushizi wekhishi othosiwe - amagremu ayi-100,
i-baking powder - isipuni esingu-0.5,
stevia - imishanguzo emi-2,
amanzi abilayo - 300 ml,
uwoyela wemifino - isipuni 1.5,
usawoti - esicongweni sommese,
ufulawa we-buckwheat - amagremu angama-200.
Ukuqala, kufanele ugcwalise ukuhlunga - amaphakethe we-stevia ngamanzi abilayo bese ugcizelela imizuzu engu-15 - 20, uphole amanzi futhi uwasebenzise ukulungisa isidlo. Hlukanisa ngokwehlukana i-stevia, ushizi we-cottage neqanda. Thela ufulawa ngesihlungo bese uhlangana nosawoti ne-baking powder, uthele kule ngxube ye-curd, engeza uwoyela wemifino. Fry ngaphandle kokufaka i-oyili, okungcono epanini eliboshwe le-Teflon.
Ungapheka ama-pancake ama-buckwheat ngokugcwaliswa kwe-berry. Iresiphi yesibili ifana neyokuqala, kuphela esigabeni sokugcina sokuxova inhlama udinga ukufaka amajikijolo. Esikhathini sikashukela, okulandelayo kuvunyelwe:
ama-currants amnyama nabomvu,
Awekho ama-pastries athandwa kakhulu ohlobo 2 lwesifo sikashukela angama-cookies we-buckwheat. Ingasetshenziselwa ibhulakufesi, noma njengesengezo sasemini. Vele unake ukuthi ingakanani i-XE equkethwe kumakhukhi anjalo. Lokhu kubhaka kunengxenye yama-gramu ayi-100 we-0.5 XE kuphela.
ufulawa we-buckwheat - amagremu angama-250,
imajarini enamafutha amancane - amagremu ayi-150,
usawoti esicongweni sommese.
Hlanganisa imajarini ethambile neqanda, usawoti ne-sweetener, hlanganisa konke kahle. Faka ufulawa ezingxenyeni, uxove inhlama enzima. Khipha inhlama bese wenza amakhukhi. Bhaka kuhhavini oshaqiwe ku-180 ° C imizuzu engama-25.
Ukubhaka okunjalo kufanelekile noma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela futhi ngeke kuthinte ushukela wegazi.
Izitsha ze-Buckwheat, okufakwa kuzo imifino noma inyama, njengesidlo sasekuseni esigcwele noma isidlo sakusihlwa.
Imvamisa, ucezu lwenyama oluphekwe luhlanganiswa nephalishi elilungiselelwe bese luhanjiswa epanini lamanzi, kufakwe uwoyela omncane wemifino.
Amakhowe ane-GI ephansi, aze afike amayunithi angama-50, ahamba kahle nge-buckwheat ebilisiwe. Ngokwesifo sikashukela, amakhowe nama-oyster amakhowe avumelekile.
Ulimi lwenyama ebilisiwe ngomunye umkhiqizo ongapheka ngawo izitsha eziyinkimbinkimbi zesifo sikashukela kusasa noma isidlo sakusihlwa.
Izitsha ze-buckwheat eziyinkimbinkimbi ziyoba isidlo sasekuseni sokuqala noma isidlo sakusihlwa sesifo sikashukela.
Ukuncoma okujwayelekile kokudla okunempilo
Konke ukudla kwesifo sikashukela kufanele kukhethwe ngokuya nge-GI. Ukudla kwansuku zonke kufaka imifino, izithelo, okusanhlamvu nemikhiqizo yezilwane. Inani lokusetshenziswa kwamafutha zemifino kumele lehliswe libe lincane.
Ukudla okungamanzi kwesifo sikashukela okungenani amalitha ama-2 ngosuku. Umthamo ngamunye ungabalwa ngokusekelwe kumakhalori adliwayo. Kukhona isigidi esisodwa soketshezi ngekhalori ngalinye.
Kukhona nezindlela ezivunyelwe zokwelashwa okushisa kwemikhiqizo. Okuhle kakhulu kuzoba - umkhiqizo abilisiwe noma oniwe. Lokhu kuzogcina kuvikelekile amavithamini kanye namaminerali kuyo.
Singahlukanisa izimiso eziyisisekelo zokudla okunesifo sikashukela:
ukudla okuphansi kwe-gi
ukudla okuphansi kwekhalori
ukuphuza okungenani amalitha amabili uketshezi ngosuku,
ukudla okuhlanu kuya kweziyisithupha
khipha utshwala ekudleni,
Musa ukulamba noma ukudla ngokweqile.
Ukudla kokugcina kufanele kube okungenani amahora amabili ngaphambi kokulala. Ukudla kwesibili okulungile kuzoba ingilazi yomkhiqizo wobisi olubilisiwe (i-kefir, ubisi olubilisiwe olubunjiwe, iyogathi) ne-apula elilodwa.
Ukuhambisana nayo yonke le mithetho engenhla kuqinisekisa isiguli izinga eliqinile loshukela wegazi futhi kunciphisa nengozi ye-hyperglycemia.
Ngaphezu kwalokho, umuntu onesifo sikashukela kufanele anake ukuzivocavoca okulinganiselayo nsuku zonke. Ngakho-ke, izivivinyo zokuzivocavoca zesifo sikashukela zinomthelela wokufaka ngokushesha ushukela egazini. Amakilasi alandelayo avunyelwe:
Unamathela kuzo zonke izincomo, isiguli esinesifo sikashukela sohlobo 2 siyazivikela ekuguqukeni kwalesi sifo siye ohlotsheni oluncike ku-insulin.
Ividiyo ekulesi sihloko ikhuluma ngezinzuzo zephalishi le-buckwheat yesifo sikashukela.
Umqondo wenkomba ye-glycemic wethulwa ukwenza ngokwejwayelekile ekudleni kohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2. Lapho kudliwa ukudla okuphezulu kwe-GI, amanani amaningi e-insulin akhiqizwa ngenxa yokugxuma okunamandla kushukela. Ngakho-ke, umzimba uyazivikela. Imisebenzi ye-Insulin:
kwehlisa ushukela wegazi oyingozi,
usabalalisa ngokulinganayo kuwo wonke umzimba,
uguqula okusalile kweshukela kube yimithombo yamafutha,
akuvumeli amafutha akhona ukuthi asha.
Umzimba wenza ukongiwa kwamandla uma kwenzeka indlala - lesi isiqubulo sokusinda esibekwe phansi ngokuziphendukela kwemvelo. Ukuze izindleko zokusetshenziswa kwemali zilondolozwe zilungile, kubalulekile ukubheka okuqukethwe kwe-GI nekhalori yemikhiqizo lapho ukhetha ukudla.
I-GI nekhalori ziyefana?
Ikhalori - inani lamandla atholwe ngumzimba ekuwohlokeni kwezinto ezitholwe ngokudla. Inani lamandla lilinganiswa kilojoule. Ikhalori ejwayelekile yokuhlukanisa ukudla:
1 igramu ye-carbohydrate - 4 kcal,
1 g amaprotheni - 4 kcal,
1 g we-lipid - 9 kcal.
Ukuqonda ukwakheka komkhiqizo kwenza sikwazi ukulungisa indlela yokudla kwabanesifo sikashukela. I-calorie ikhombisa umehluko ngokusetshenziswa kwamandla kwamandla kwemikhiqizo ehlukile. Akuvamile ukuthi ukudla okudla okune-kilojoule okuncane kube nenkomba ephansi ye-glycemic. Isibonelo, imbewu ye-sunflower iphezulu kilojoule, kepha i-GI yayo ingamayunithi ayi-8. Zigaywe isikhathi eside, zivikela emizweni yendlala futhi zinikeze ukwanda kancane kancane kweglucose.
Ngabe i-GI incike kuphi?
Izinkomba ezithinta inkomba ye-glycemic yemikhiqizo:
Indlela yokwelashwa okushisa.
Isilinganiso samaprotheni namafutha maqondana nama-carbohydrate. Bancane kakhulu, likhuphula inani.
Inani le-fiber. Kugaywa kancane, ngakho-ke i-fiber coarse iyisisekelo sokudla kwesifo sikashukela.
Ukusebenza Kokusayizi Isitsha kufanele silingane endebe ejwayelekile.
Ukuba khona kwama-carbohydrate "ahamba kancane" noma "okusheshayo".
Kungani umuntu onesifo sikashukela enenkomba ye-glycemic?
Isibalo se-GI sokudla kwabantu abanesifo sohlobo 1 nohlobo 2 sibalulekile. Ukugxuma okubukhali nokuqinile kushukela kungadala izinkinga, ukoma, noma ukufa, noma ngabe uluhlobo luni lukashukela. Ukudla inombolo 9 kungalapha isifo sikashukela. Ukudla okunjalo kusiza ukwehlisa isisindo futhi kugweme i-atherossteosis, unhlangothi kanye nokushaya kwenhliziyo.
Iphrofayili yenkomba ejwayelekile ye-glycemic
Egazini, ngezinqubo zokuzibamba, kugxilwa i-glucose ethile, okudingekayo ekusebenzeni komzimba okujwayelekile. Ngemuva kokudla ukudla kwe-carbohydrate, amazinga kashukela egazi ayanda. Inkomba ye-glycemic (GI) ibuye ikhombise inani leshukela egazini elihhafu wehora ngemuva kokudla.
Ngamandla, i-GI yayo yonke imikhiqizo yasungulwa, futhi isilinganiso sokuwohloka koshukela sathathwa njenge-100% ngokuphelele. Ngokusekelwe kudatha etholakele, kwakheka amaqembu ama-3 wemikhiqizo yokudla enenkomba ye-glycemic ephezulu, ephakathi nephansi. Kuyaqapheleka ukuthi maduze nje lapho ama-carbohydrate eyingxenye yomkhiqizo ayangenwa khona, ayanda i-GI yawo.
Ukusetshenziswa kwemikhiqizo enenkomba ephezulu kunomthelela ekukhuleni kwamandla okusheshayo namandla angezekile, kepha futhi kunezingqinamba zawo:
neqhaza ekwakhekeni kwamafutha angenasisekelo,
vusa ukuqala kwendlala,
contraindified for sikashukela.
Kodwa-ke, i-GI ihlala iyinto eyisisekelo ekwakheni imenyu efanelekile yesifo sikashukela. Ngakho-ke, ukubaluleka kwesidingo sokuthola inkomba ngaphambi kokudala indlela yokudla kwabanesifo sikashukela akunakuphikwa.
Ungakhohlwa ukuthi ukwanda kwe-glycemic ekhuphukayo kungawucekisa umphumela wenkimbinkimbi yezidakamizwa.
Uhlu Lokudla Oluphansi lweGlycemic Index
Imikhiqizo enenkomba ye-glycemic ephansi, itafula elikhonjiswe ngezansi, ilungele ukwehla kwesisindo nokwakha imenyu yesifo sikashukela, ngenxa yekhono lazo lokuhlinzeka umzimba ngamandla futhi ngokulinganayo. Ngakho-ke, izithelo eziningi azinayo i-GI ephansi kuphela, kodwa futhi ine-L-carnitine, enikeza ukushiswa kwamafutha okwengeziwe.
Ungabona ukuthi inyama, inhlanzi, izinkukhu kanye nemikhiqizo yobisi cishe azethulwanga etafuleni. Lokhu kungenxa yokuqukethwe okuphansi kwama-carbohydrate kuzo, eziguqula zibe yimikhiqizo ene-zero GI ephelele. Ngakho-ke, ngokunengqondo, hlanganisa amaprotheni nemikhiqizo ene-GI ephansi. Indlela efanayo isetshenziswa ekudleni okuningi futhi iboniswa ukuthi isebenza ngempumelelo futhi iphephile.
Ukudla kwenkomba ye-glycemic ephansi:
Ama-cranberry amasha / afriziwe 47 Peas oluhlaza 45
Ilayisi elingavuthiwe 45 Usawoti wegilebhisi osanda kufakwa 45
Buckwheat 40 Ama-Prunes 40
Ipomegranate 35 I-Orange, ama-apula, amapulamu 35
Amabhilikosi omisiwe 35 Amaranth 35
Amapheya, umpe 35 Quince fig 35
I-Falafel (kusuka ku-chickpeas), ufulawa we-chickpea 35 Izinhlobo eziningi zikabhontshisi 35
Imvubelo, kufaka phakathi ubhiya 35 Utamatisi noma isoso, utamatisi owomile 35
Imbewu yefilakisi, imbewu ye-sesame, imbewu ye-poppy, imbewu sunflower 35 Ummbila wasendle 35
Isinaphi 35 Isinkwa esimile 35
IQuinoa, ilayisi yasendle 35 I-almond enama-almond engenamathambo 35
I-Durum kakolweni pasta 35 I-yoghurs enobisi noma yobisi 35
Amabhilikosi 30 I-raw beet kanye izaqathe 30
Garlic 30 Ubhontshisi oluhlaza 30
Izithelo zothando 30 Raw Soy, Almond noma Oat Ubisi 30
Imililo 30 Tangerines, amagilebhisi 30
Raw turnips, utamatisi 30 Pearl 30
Izinkukhu 30 USoy Vermicelli 30
Ama-Goji amajikijolo, ama-cherries, ama-blueberries 25 Ama-raspberry, ama-Strawberry, ama-Red Currants, ama-Gooseberries, ama-Blackberry 25
Ubhontshisi flazole, mungo 25 Ufulawa weSoya 25
Ibhali 25 Ama-Green Lentils, Ama-Pey Dry 25
I-Hummus (i-chickpea) 25 I-peanut, i-almond, i-hazelnut paste (mahhala ushukela) 25
Isitshalo seqanda, i-artichoke 20 Lemon nojusi kulo 20
Imikhiqizo yeSoya (inyama) nesosi yesoya 20 I-Agave Syrup 15
I-Asparagus, i-cemry celery, i-chard 15 I-Broccoli, i-Cauliflower ne-Brussels Sprouts 15
Amantongomane, ama-Almonds, amaPistachios 15 Iklabishi elijwayelekile nelilukiwe 15
I-Zucchini, ukhukhamba, ama-gherkins 15 Isipinashi, i-Endive, i-Fennel, i-Ginger 15
Izithombo negciwane lezinhlamvu 15 Ama-shots, amaliki futhi ajwayelekile 15
I-Blackcurrant, i-physalis, i-lupine 15 Walnuts, Pine, Hazelnuts, Cashew 15
I-chicory, i-pepper bell, isithombo 15 I-Rhubarb, isaladi eluhlaza 15
Amagatsha 15 I-Soya, tofu, tempeh 15
Amakhowe 14 I-Avocado 10
Amakati, ama-lobster, ama-lobster 5 Uviniga, izinongo, amakhambi 5
Kepha ungavumeli imikhiqizo ene-GI esezingeni eliphakathi, ikakhulukazi:
ujusi we-oatmeal ne-orange (65),
ama-beet abilisiwe futhi aphambili (64),
amazambane ejazi (64),
i-rye nesinkwa esiphelele sokusanhlamvu (63),
imifino ekheniwe (63),
irayisi elenziwe (60),
ikhabe nobhanana (60),
ama-Persimm kanye ne-kiwi (50).